Maquillaje Kuyindlela yokuhlobisa umzimba wethu, ikakhulukazi esikhumbeni, ukuze ubukeke uphelele. Ngalesi sizathu, lesi yisigaba esibaluleke kakhulu kwaBuhle, ngoba kuyindlela engcono yokuqhakambisa ubuhle obusithintile noma ukufihla ukukhubazeka esikwenzile nathi.
Yingakho sizokhuluma kakhulu ngakho ukwakheka kwesisekelo, izinhlobo zayo ezahlukene noma imisebenzi; njengemivimbo yamehlo ehlukene ekhona kanye nendlela engcono yokugqamisa amehlo ethu kuya ngohlobo lweso esinalo; noma izinhlobo ezahlukene zezindebe zomlomo kanye nobuhle nobubi bazo. Ngamafuphi, sizokhuluma nawe ngalokhu:
Izindebe zezindebeIzindebe ziyingxenye yobuso ukuthi uma singazinakekeli nsuku zonke, kungenzeka uzithole zomile, zinqunyiwe futhi zinemifantu, ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi ube nezimonyo zezindebe esandleni, kungaba ngemibala emfashini njengokububende, okupinki noma okukhakhayi noma okusobala, okunikeza ukufinyela okungenakulinganiswa ezindebeni, ngoba zingabokuqala ukuzwa ukushintsha kwezinga lokushisa lapho sisuka ehlobo siye ekwindla. Ukwakheka kwezindebe ngokusobala kuyithuluzi elibalulekile kunoma yisiphi isikhwama sabesifazane, ukuze zithintwe noma kuphi, zihlala ziphelele noma kuphi. Sikukhombisa amathiphu amahle kakhulu nemikhiqizo yezimonyo esezingeni eliphakeme kuzo zonke izinkathi zonyaka.
Ukwakheka ebusuku: Zonke izimonyo zasebusuku zinenhloso, ngakho-ke iqiniso lokufaka izimonyo ngemibala ecijile kungenxa yokuthi izindawo zobusuku lapho uvame ukuphuma khona ebusuku zinokukhanyisa okususa ukwakheka kokukhanya, ngakho-ke kufanele kugqanyiswe kakhulu ukuthi kuyaziswa, kukhulu kubo bonke abantu besifazane, ngoba banikeza inkulumo ephilayo kakhulu ekubukeni nakulo lonke jikelele. Ngakho-ke, ukwakheka kwakusihlwa kufanele uhlale ukhetha imibala emnyama nokwakheka okukhanyayo, ukwenza ukubukeka kwakho kubukeke kuyinkimbinkimbi futhi kube nobuciko. Sikutshela ukuthi umbala wezinkanyezi wezimonyo zakusihlwa uyigolide.
Amehlo akha: Njengokwejwayelekile, uma sikhuluma ngezimonyo, iningi lethu lithanda ukugqamisa ezinye izindawo zobuso bethu kunezinye, ngakho-ke sisebenzisa ukukhanya nokukhanya kakhulu emehlweni, ngokwenza izimonyo zamehlo ezikhethekile, noma ngabe kuyizithunzi, imascara noma amapensela. izinkophe zamehlo ezinikeza ukubukeka okuphezulu ekubukekeni. Lapha ungazazi zonke izeluleko nezinkinobho uma kuziwa ekwakheni amehlo akho kahle, ukuze abonakale emakhulu, asondelene ndawonye, ​​ungalungisa noma yikuphi ukungapheleli noma ufunde ukwakheka ngokuya ngezidingo zakho, ngoba owesifazane ngamunye ungumhlaba futhi ukwakheka kwamehlo kukhethekile ebusweni ngabunye, ukubathola ngemibala eminingi nangezindlela zokwakheka.
Isikhumba makeup: Ukuze siphathe kahle isikhumba sethu, kufanele sicacelwe ukuthi imiphi imishini okufanele siyisebenzise engalimazi isikhumba esibucayi, ngoba ngokwenziwe kwesikhumba singathola izinhlobo nezinhlobo eziningi emakethe, okuya ngohlobo lwesikhumba sethu okungenzeka noma kungabi nenzuzo. Kufanele futhi ucabangele lapho uthenga ukwakheka kwesikhumba, ithoni yaso, ukuze kuthi lapho usisebenzisa, kugqame izici zakho futhi kungazishiyi zifiphele. Ngakho-ke unganqikazi ukwazi okwengeziwe mayelana nokwakheka kwesikhumba, ube ngongoti uma kukhulunywa ngokugcoba nokwenza usesikhathini, kokubili ngemibala nangokwakheka, ngoba into ebalulekile ukunakekela kakhulu isikhumba.
Makeup yosuku: Zonke izimonyo zosuku kufanele zibe ngamathoni athambile, ngaphezu kokulayisha ngokweqile, ngokuyisisekelo usebenzisa izithunzi ezibomvana, eziluhlaza okwesibhakabhaka noma ezinsundu kodwa njalo ngamathoni akhanyayo, ukuze izici zobuso zingabukeki zigqanyiswe kakhulu, into engahambi kahle ngokukhanya kwemini. Ngakho-ke, kufanele usebenzise izimonyo zosuku ngesisekelo esithambile, ngokuya ngombala wesikhumba sakho, noma ngabe uketshezi, ukhilimu noma impuphu, ukufezekisa isiphetho sokwenza usuku oluhle. I-Orange futhi iyindlela enhle yokulungisa noma ukugqamisa ukubukeka, kepha ungalokothi ube nethoni eqinile, ngoba izomisa ukwakheka kosuku futhi ngeke unikeze isithombe esihle.
Izithunzi: Bathi isithunzi esibekwe kahle singangcono kunakho konke ukwakheka emhlabeni, ngakho-ke kufanele sisebenzise leyo ndlela enhle. Kwesinye isikhathi sikholwa ukuthi izithunzi azihlobisi ubuso noma ukuthi zisebenza kuphela ukumboza amalambu noma imininingwane esingafuni ukuyikhombisa, kepha kufanele sazi ukuthi sizibeka kuphi futhi kanjani. Ngakho-ke lapha uzothola zonke izinhlobo zamathiphu ukuze ukwazi ukujabulela le nketho ngokugcwele nangokufanele. Usebenzisa imikhiqizo ehamba phambili noma leyo efanelekela kahle okufunayo. Amacebo akhona kuzo zonke izinhlobo zezimonyo futhi lapha ungajabulela ezinye zazo ukwenza izithunzi zakho zibe ngumthombo omuhle.
Ngaphezu kwalokho, sizonikeza izeluleko ngemikhiqizo ehamba phambili emakethe, kanye nezinyathelo zokufeza ukwakheka okuhlukile ekhaya. I- izesekeli ezinhle kakhulu, konke okuphathelene nalokho esingakuthola emakethe yamanje ukuze sijabulele izesekeli ezihamba phambili.
Izihloko, ilukuluku, amathiphu neminye imininingwane ukwenza kube lula ukubukeka buhle futhi buhehe, ngaphakathi nangaphandle. Lapha uzothola, kusuka ku- amabhulashi a ama-curls ama-eyelash, ukuhamba lipstick wemikhiqizo ehamba phambili.
Ngakho-ke akufanele ungabaze lapho ubheka kulesi sikhala, i- izesekeli ezinhle kakhulu kowesifazane ofuna ukujabulela ubuhle bangaphandle futhi unikeze wonke umuntu okuzungezile ubuso bakho obuhle kakhulu. Ngaphandle kokungabaza, lapha uzothola izesekeli ezihlanganisiwe, ngazo zonke izinhlobo ze izimonyo.
Kuhle ngaso sonke isikhathi ukwazi okwengeziwe ngezindlela zokugcoba izimonyo, izeluleko namasu amancane, ukuze siphume siphume emigwaqweni ngobuso obuhle. Kungakho lapha ungathola uchungechunge lwe amaqhinga okwenza izimonyo ekahle kuwo womabili amantombazane amancane nabadala, kanye amaqhinga okwenza izimonyo ukususa amabala noma izindlela zokwenza izimonyo ezilula ukubukisa ikhala elincanyana, usebenzisa imibala ehlukahlukene yokwenza ukwakheka okuhlukile ebusweni bakho. Ungahle ungadingi uhlu olukhulu ukwazi ukuthi ungaphatha kanjani ukwakheka kwakho phambi kwesibuko, kepha akukaze kube buhlungu ukwazi okuthile. iqhinga lokwenza izimonyo nganoma yisiphi isikhathi esithile. Ngakho-ke sikucebisa ukuthi ulandele lokhu kuya encwadini amaqhinga okwenza izimonyo uma ufuna ukuba njalo iphelele usuku lonke
Por USusana godoy kwenza Izinyanga ze-2 .
Uyazi ukuthi ungawakha kanjani amehlo aluhlaza? Bangobunye bokubukeka okuvusa inkanuko futhi okunentshisekelo enkulu. Kuyiqiniso ukuthi ngaphakathi kuye, ...
Uma unamehlo amancane ngokuqinisekile uzofuna ukudala inkohliso yokuthi makhulu, into ngaphandle kokungabaza ...
Amathrendi okwenza izimonyo ngesibindi kuleli hlobo
Izitayela ze-Makeup zihlukahlukene kakhulu kulezi zinsuku, okuhle, ngoba ngamunye wethu une ...
Por USusana Garcia kwenza Izinyanga ze-7 .
Yize u-Eva Wonyaka Omusha wehlukile kwezinye ngenxa yezimo esizithola sikuso, iqiniso ukuthi ...
Ungalifihla kanjani ikhala lakho ngezimonyo
Por USusana godoy kwenza Izinyanga ze-7 .
Ukufihla ikhala ngezimonyo nakho kungenzeka ngakho-ke, sizokunikeza izinyathelo ezimbalwa, ngokuya nge ...
Imibono kaKhisimusi yokugqoka ekhaya!
Ubani othe singagcoba izimonyo zikaKhisimusi ekhaya? Kulungile kulo nyaka, yilokho okuthintayo. Kakade…
Ungenzi lawa maphutha lapho wenza amehlo akho
Por USusana godoy kwenza Izinyanga ze-9 .
Yenza amehlo akho inqubo oyazi kahle isikhathi eside. Okungenani, sicabanga ukuthi siyakubusa kuze kube ...
Ungayivimba kanjani i-mascara ekushiyeni ama-clump on your lashes
IMascara ayinakulahleka lapho kukhulunywa ngokwenza izimonyo. Ingenye yalezo zesekeli eziyisisekelo nezidingekayo ukuthi ...
Izindlela ezi-4 zokubeka izimonyo emehlweni akho lapho ugqoke izifihla-buso
Por USusana godoy kwenza Izinyanga ze-10 .
Ukwenza izimonyo kwamehlo bekulokhu kungenye yezinyathelo ezinhle lapho besifuna ukuqedela ukwakheka. Kepha ezinyangeni ezimbalwa ...
Yiziphi izitayela zokwakheka kwalokhu kuwa kwe-2020?
Ukwindla sekuvele kukhona ekhoneni. Besingathanda ukuthi ihlobo lihlale isikhathi eside, kepha ...
Por USusana godoy kwenza Izinyanga ze-11 .
UBobbi Brown ungomunye wemikhiqizo emihle yezimonyo futhi ngenxa yalokho siyayithanda imikhiqizo yabo. Eminye imikhiqizo e ...
Ungawasusa kanjani ama-eyelashes angamanga ngaphandle kokulimaza amehlo akho
Ungawasebenzisa kanjani ama-hydroquinone okhilimu abanesici
Izinduna: ungayikhipha kanjani induna enkulu
Susa ama-blackheads azungeze izindebe kalula
Susa izinwele unomphela